SEOReseller: White Label SEO Platform, အေဂျင်စီများအတွက်သတင်းပို့ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ Martech Zone
များစွာသောဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုသာအာရုံစိုက်ကြသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းတို့တွင်ချို့တဲ့နေသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization (SEO ဆိုသည်မှာ) ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ပြန်လာခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ရရှိရန်အလားအလာကောင်းများနှင့်မပြည့်စုံပါဟုဆိုလိုသည်။
အသုံးပြုသူသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၀ ယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ရှာဖွေခြင်းသည်အခြားသောမည်သည့်လမ်းကြောင်းနှင့်မဆိုလိုက်ဖက်သည်။ အခြားကြော်ငြာနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းများသည်သင်၏သတင်းကိုအလားအလာရှေ့မှောက်တွင်သိရှိစေခြင်းဖြင့်အသိပညာတိုးပွားစေရန်မျှော်လင့်သည်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကသင့်အားဆန္ဒအလျောက်သင့်ကိုမကြာခဏခေါ်ဆောင်လာတတ်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အဓိကအာရုံစိုက်ရာ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ငြားလည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို SEO အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုပါ။ သင့်တွင်မယုံနိုင်လောက်သောအမှတ်တံဆိပ်၊ ခိုင်မာသောစာတိုပို့ခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ဖောက်သည်များအတွေ့အကြုံရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခါရှာဖွေသူများသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ SEO ကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည်၎င်းကိုပြောင်းပြန်လုပ်သည်။ အမြောက်အမြားကိုအမြတ်ထုတ်။ အမြတ်ထုတ်သည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံမရှိသောကြောင့်ထိုအသွားအလာကို ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပါ။
သင်၏အေဂျင်စီအတွက် White Label SEO ဝန်ဆောင်မှု
ရောင်းသူ သင်၏အေဂျင်စီအတွက် SEO အဖြူရောင်၊ SEO အစီရင်ခံခြင်းနှင့် SEO ၀ န်ဆောင်မှုအဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကိုပေးထားသည်။ သင်၏ဖောက်သည်များသည် ၀ န်ထမ်းအသစ်များကိုထပ်မံထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲသင်လိုအပ်သည့်လုပ်အားကိုရပြီး၎င်းတို့အားဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဘလော့ဂ်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာကိုးကားမှုတည်ဆောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ စာမျက်နှာပေါ်ရှိ SEO၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက် optimization နှင့်အမှတ်တံဆိပ် SEO အစီရင်ခံစာများကိုပေးသည်။
ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်တပ်ထားသော SEO ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းချက်များတွင် -
SEO စာရင်းစစ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ချက်ချင်းအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအခွင့်အလမ်းများ၊ သော့ချက်စာလုံးထောက်ခံချက်များနှင့်သင့်ဖောက်သည်များ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏အဆင့်အတန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
ဒေသတွင်း SEO စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း - ဒေသတွင်းအဆင့်အခွင့်အလမ်းများ၊ သော့ချက်စာလုံးထောက်ခံချက်များနှင့်သင့်ဖောက်သည်များ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏အဆင့်အတန်းကိုရှာဖွေပါ။
အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေး SEO လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း - ပိုမိုသောစကားဝိုင်းများကိုမောင်းနှင်ပြီးသင့်ထုတ်ကုန်များကိုသက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုရလဒ်များမှအဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ပါ။
keyword သုတေသန - ပြည့်စုံသောသော့ချက်စာလုံးသုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း - သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သို့သတင်းပို့သောအခါမိတ္တူများနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်ပါ ၀ င်ရန်လူတို့အားအားပေးပါ။
On- စာမျက်နှာ Optimization - သင့်စာမျက်နှာရှာဖွေရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကောင်းမွန်စွာရှာဖွေရန်နှင့်ရည်ညွှန်းကိုးကားရန်သင်၏စာမျက်နှာ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါ။
အဖြူရောင်တံဆိပ်ဒိုင်ခွက်များ - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အပြည့်အ ၀ မြင်နိုင်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီ SEO အစီရင်ခံခြင်း dashboard ။
White Label အစီရင်ခံခြင်း - ဂူဂဲလ် Analytics၊ ဂူဂဲလ်စီးပွားရေးနှင့်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေး Console တွင်အဆင့်အတန်းခြေရာခံခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူသူများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် SEO အစီရင်ခံခြင်းကိရိယာများပါရှိသည်။
အဆိုပြုလွှာတည်ဆောက်သူ - သင်၏ SEO၊ ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်း၊ လူမှုမီဒီယာနှင့် PPC အလားအလာအတွက်စိတ်ကြိုက်အဆိုပြုချက်များကိုဖန်တီးပါ။ အဆိုပြုချက်အားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ခြေရာခံခြင်း!
စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု - SEOReseller သည်သူတို့လုပ်သမျှကိုနှစ်သက်သောအကောင်းဆုံး ၀ န်ထမ်းများကိုသာငှားရမ်းသည်။ သင်၏အသင်းမှလူများအားစုဆောင်းပြီးလေ့ကျင့်ပေးရန်သူတို့ကိုဂရုပြုပါစေ။
အေဂျင်စီအတိုင်ပင်ခံ - သင်၏စီမံချက်မန်နေဂျာနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်သင့်ဖောက်သည်များ၏စီမံကိန်းများအောင်မြင်စေရန်သင်နှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်။ အရင်းအမြစ်များနှင့်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းများတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်သင်သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုအာရုံစိုက်နိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏အေဂျင်စီ၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုဖြည့်စွက်နိုင်ပြီးဖောက်သည်များအတွက်သင်လိုအပ်သောအလုပ်ကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ အိမ်တွင်းအရည်အချင်းများကိုငှားရမ်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းရည်ကိုဟန်ချက်ညီစေရန်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ SEOReseller ၏အဖြူရောင်တံဆိပ်ဖြစ်သော SEO အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များထံမှရလာဒ်များရရှိရန်အရင်းအမြစ်များကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် SEO package များမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀ နှင့်စတင်ပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီတက်လှမ်းနိုင်သည်။ SEOReseller သည်ဝဘ်ဒီဇိုင်း၊ pay-per-click စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူမှုမီဒီယာ၊ ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။
ထုတ်ဖော်: ငါကတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ ရောင်းသူ.
Tags: ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအကြောင်းအရာ seo န်ဆောင်မှုအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေး seokeyword ကိုသုတေသနပြုစာမျက်နှာ optimizationppc စီမံခန့်ခွဲမှုပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် seoဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုပြန်လည်ရောင်းချသူ seoseoseo အေဂျင်စီseo ပလက်ဖောင်းseo န်ဆောင်မှုseo tools များချစ်သူလူမှုမီဒီယာseo အဖြူရောင်တံဆိပ်